'अब सामुदायिक विद्यालय यो वर्षबाटै निजीको हातमा पुग्ने निश्चित छ' - समय-समाचार
‘अब सामुदायिक विद्यालय यो वर्षबाटै निजीको हातमा पुग्ने निश्चित छ’
१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २२:४५
यो मुलुक आशङ्कै आशङ्कामा चलेको छ । यसबारेमा मैले धेरै छलफल गरिसकेको छैन । तर पनि म २०७२ मन्त्री हुँदा मैले निजीलाई सार्वजनिकको पूरकको रूपमा बुझ्छु भनेको थिएँ । अहिले निजी, सहकारी र सरकारी भनेर संविधानले नै प्रत्याभुत गरेको अवस्था छ । तीनखम्बे हाम्रो नीति हो । त्यसैले संविधानको बर्खिलाप भएको छैन । यो तीनखम्बे नीति अन्तर्गत एउटा निजी स्कुलले सार्वजनिक स्कुललाई मजबुतीकरण गर्न भूमिका खेल्ने कुरा नराम्रो होइन । हामी जे कुरालाई पनि नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने गर्छौं, त्यो पनि ठीक भएन । यहाँका राम्रा भनिने स्कुलले पब्लिक स्कुलसँग गाँसिएर योगदान गरे भने कसरी नराम्रो हुन्छ ? यदि उनीहरु आफै कमजोर छन् भने त आफै ढल्छन् । हामीले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन पास गर्दा साझेदारी मोडल विकास गर्ने भनेका थियौँ । त्यसको मोडल पनि फरक फरक हुन्छ । दशकीय रूपमा हामीले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छौँ । त्यसअन्तर्गत त्यो अभियानलाई सहयोग गर्नलाई निजीले पब्लिकलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनिएको हो । यस्तो अवस्थामा त्यो कसरी गलत हुन्छ ? यो सोच्नसक्नुपर्छ । यो सोचाई कमजोर हो । यहाँका राजनीतिक शक्ति कस्ता हुन्छन् ? सङ्घीयता कस्तो हुन्छ ? यति कमजोर ढङ्गले पब्लिक सिस्टमको पक्षमा उभिएको हो र ? त्यसमाथि हामीले २०७२ सालमा संविधान नै बनाएर लोक कल्याणकारीको कुरा गरिएको छ । बजेट बढेको छ । अहिले पनि एक नम्बरमा शिक्षाको बजेट बढेको छ । सार्वजनिक विद्यालयको दशकीय कार्यक्रम घोषणा भएको छ । त्यसैले यसलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ ।#सामुदायिक विद्यालय